बुर्तिवाङ सामा स्थित घरगोठमा आगलागी हुँदा रु ६ लाख बराबरको क्षेती ! – ebaglung.com
बुर्तिवाङ सामा स्थित घरगोठमा आगलागी हुँदा रु ६ लाख बराबरको क्षेती !
२०७३ माघ ८, शनिबार १९:३२	Top News, थप समाचार
बुर्तिवाङ २०७३ माघ ८ । केहि दिन यता बागलुङ जिल्लाका विभिन्न भागहरुमा आगलागीका घटनाहरु बढन लागेका छन् । आजै मात्र बुर्तिवाङ गाविसको एक घरमा विद्युत लाईन सर्ट भै आगलागी हुँदा करीब ६ लाख रुपयाँ बराबरको धनमाल क्षेती भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार बुर्तिवाङ गाविस ७ सामा स्थित केरबहादुर घर्तीको खरको छाना भएको दुई तल्ले कच्ची घर र गोठमा आजै दिउसो पौने २ बजेको समयमा अचानक विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा घरगोठ भित्र रहेका लत्ताकपडा भाँडा वर्तन, खाद्यान्न सबै जलेर खरानी भै रु ६ लाख बराबर नोक्सान भएको छ ।
सो आगो प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा साढे ५ बजेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक अनिलकुमार खड्काले जानकारी दिए । आगलागीमा परी कुनै मानवीय तथा पशु चौपायाको क्षेती नभएको पनि प्रनाउ खड्काले बताए ।
प्रचण्ड-बाबुराम दलाल बनेर देश र जनताको सपना माथी गद्दारी गरे : ओली
विम पुस्तकालयले दिएको ज्ञान र सीपले शिक्षा, संस्कृति र साहित्यमा बागलुङ अब्बल !